Best iPhone Controlgba Cha Cha njikwa Na 2020 - Iphone
ihe ime mmụọ pụtara nnụnụ na -akụ na mpio
iphone 6 na -akpọ oku na 2017 nke ya
kedu ihe mere na android m anaghị eziga foto
iphone 6 m na -ekpo ọkụ
’Re banyela n'egwuregwu mkpanaka ma ị na-achọ ụzọ iji nweta uru na asọmpi ahụ. Inweta a iche iche gaminggba Cha Cha njikwa gị iPhone nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe na-egwu ọkacha mmasị gị mobile ngwa. N'isiokwu a, m ga-agwa gị banyere kacha mma iPhone gaminggba Cha Cha njikwa na 2020 .
You nwere XBOX ma ọ bụ Playstation 4?
Ọ bụrụ n’inwe iPhone na-agba iOS 13, ịnwere ike ijikọ ya na onye Xbox gị ma ọ bụ Playstation 4 njikwa site na iji Bluetooth.
Akpa, jide n'aka na iOS 13 arụnyere na gị iPhone. Nwere ike ịlele site na ịga Ntọala -> General -> Banyere ma lee anya na nọmba na-esote Software Version. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu 13, ma ọ bụ 13 na-esote ntụpọ ntụpọ na ọnụọgụ ndị ọzọ, a haziela gị.
iphone 5 igwe okwu anaghị arụ ọrụ
Ọ bụrụ na iPhone gị anaghị agba iOS 13, gawa na Ntọala -> General -> Mmelite Ngwanrọ na pịa Ibudata na Wụnye .
Ozugbo emelitere iPhone gị na iOS 13, ịnwere ike ijikọ ya na onye Xbox gị ma ọ bụ onye njikwa 4 Playstation.
Jikọọ iPhone Gị PS4 njikwa
Mepee Ntọala wee pịa Bluetooth . N'otu oge pịa ma jide Igodo egwuregwu na Share bọtịnụ ruo mgbe DUALSHOCK 4 Ikuku njikwa egosi n'okpuru Ngwaọrụ m . Kpatụ onye njikwa PS4 gị na ndepụta ahụ. ’Ll ga-amara na ejikọtara onye njikwa gị na iPhone gị mgbe ọkụ na-achịkwa ihe ọkụ na-acha uhie uhie.
Jikọọ iPhone Gị na Xbox Otu njikwa gị
Mepee Ntọala na iPhone gị wee pịa Bluetooth . Pịa ma jide bọtịnụ Njikọ na XBOX Otu njikwa gị ruo mgbe bọtịnụ etiti malitere ịmalite. Na iPhone gị, kpatụ XBOX One njikwa gị n'okpuru Ngwaọrụ m ijikọta ha.
Best iPhone Gaminggba Cha Cha njikwa
N'okpuru ebe a, anyị ga-atụle ụfọdụ ndị ọkacha mmasị anyị iPhone ndị na-achịkwa egwuregwu. Onye ọ bụla n'ime ndị njikwa a nwere ike ijikọ na iPhone gị site na Bluetooth!
Ihe PXN Ọrụ bu onye na-egwu egwuregwu ihe eji eme ihe n’elu iPhone. Emeela ya maka iPhone (MFi) ka ọ bụrụ nke a kwadoro, nke pụtara na emere onye njikwa a dịka ụkpụrụ nke ụkpụrụ Apple. Ngwaọrụ ndị na-abụghị MFi nwere ike ibute nsogbu na iPhone gị ma nwee nsogbu ijikọ na mbụ.
Onye njikwa a na-abịa na njem njem dị mfe nke ị nwere ike itinye na onye njikwa ahụ. Ọ nwere ụdị Bluetooth dị ihe dị ka mita asatọ.
gịnị kpatara na agaghị m ehichapụ foto site na iphone
Nwere ike ịchọta ọtụtụ egwuregwu iji soro onye na-elekọta PXN gị rụọ ọrụ na weebụsaịtị PXN ma ọ bụ site na ibudata ngwa PXN. Onye nchịkwa a dị elu na-abịa na mkpado ego kwesịrị ekwesị - $ 59.99.
Ihe IkeLead PG8710 bụ ihe oké ọnụ iPhone gaminggba Cha Cha njikwa na nnukwu iri awa ndụ batrị. Ihe nchịkwa a nwere ntọala wuru maka iPhone gị, ọ bụrụhaala na ngosipụta ya dị sentimita isii ma ọ bụ obere nha. Ngwaọrụ Bluetooth a bụ ngwaọrụ asatọ.
Nwere ike melite ziri ezi na isi ihe osise nke onye njikwa a site na nbudata ngwa ShootingPlus V3 n'efu. PG8710 na - efu $ 34.99 ma nwee nnukwu 4-kpakpando Amazon dabere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iri ise nyocha.
Ihe UXSIO PG-9157 bụ mmefu ego iPhone onye njikwa egwuregwu, na-efu naanị $ 22.99. Ihe nkwado telescopic a na-achịkwa nwere ike ijide ekwentị ọ bụla nwere obosara nke 3.7 sentimita ma ọ bụ obere, na-eme ka ọ kwekọọ na ụdị iPhone ọ bụla.
Ekwela ka ihe nzuzu site na onu ahia - nke a bu ihe nchịkwa di ike. Ọ nwere ike ịdịru ihe dị ka awa iri na ise ma nwee eriri Bluetooth nke ruru 25 ụkwụ.
Na nwute, ngwaọrụ a adabaghị na Apple TV, yabụ ị ga-abanye na nsogbu ma ọ bụrụ na ị gbalịa ịlele ihuenyo iPhone gị na telivishọn gị.
N'agbanyeghị mmachi a, UXSIO PG-9157 nwere akara ngosi 4.6 dabere na nyocha 110 Amazon.
Delam Mobile Gaming njikwa
Ihe Delam Mobile Gaming njikwa dịtụ iche karịa ndị ọzọ na ndepụta ahụ. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ anyị kwadoro bụ ndị njikwa njikwa dị ka njikwa na bọtịnụ ọdịnala na ọystụ, nke a abụghị.
Onye na-achịkwa Delam nwere nnukwu ụlọ akụ ike 4000 mAh maka ịchaji na ihe nchekwa dị mma ga-enyere gị aka igbochi iPhone gị ka ọ ghara ịdị ọkụ. O nwekwara aka ekpe na aka nri na-ebute ya, na-eme ka ọ dị mfe igwu egwu egwuregwu nke onye mbụ. Ihe nkwado ndị na - achịkwa ihe a nwere ike dabara na iPhone yana ngosi ngosi 4.7-6.5 (ndo, ndị ọrụ iPhone SE).
Nke a njikwa n'ezie agwakọta console na mobile gaminggba Cha Cha n'ụzọ amamihe. Ga-enwe ọ enjoyụ na mmetụ igwe eji arụ ọrụ nke igwe eji egwu egwu, jikọtara ya na uru aka nri na aka nri yana nkasi obi nke njikwa ihe njikwa.
The Delam Mobile Gaming Control naanị na-efu $ 17.99 ma nwee akara ngosi 4.5 Amazon dabere na nyocha karịrị 85.
Egwuregwu Egwuregwu Ekwentị Na-eme Ka Ọ Dị Mfe!
Ugbu a ị maara ihe niile ịchọrọ gbasara ndị na-achịkwa egwuregwu maka iPhone. Anyị na-atụ anya na ị ga-ekerịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta iji gwa ndị ezinụlọ gị, ndị enyi, na ndị na-eso ụzọ banyere ndị na-achịkwa egwuregwu kacha mma iPhone! Enwere ike ịhapụ anyị ikwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara egwuregwu egwuregwu iPhone.